Nepal Samaya | सुल्झिन नसकेका पृथ्वीका पाँच रहस्य : बरमुडा खोंचदेखि बोल्ने खेलौनासम्म
सुल्झिन नसकेका पृथ्वीका पाँच रहस्य : बरमुडा खोंचदेखि बोल्ने खेलौनासम्म
नेपाल समय | काठमाडौं, बिहीबार, भदौ १७, २०७८
पृथ्वीमा थुप्रै रहस्यमयी स्थान छन्। जसको रहस्य अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। पृथ्वीमा थुप्रै रमाइला स्थान छन्। जहाँ मानिस मनोरञ्जन लिन जाने गर्छन्। र, अर्कोतर्फ यति डर लाग्दा स्थान पनि छन्। जहाँ मानिस बिर्सेर पनि जान चाहँदैन। आज हामी यस्तै रोचक स्थानको बारेमा चर्चा गर्नेछौं।
यस स्थानलाई पृथ्वीको नरकको द्वार पनि भनिन्छ। यो स्थानमा थुप्रै रहस्य लुकेको छ। यो पृथ्वीको सबैभन्दा गर्मी स्थान मध्ये एक हो। उक्त स्थान उत्तरी इथिपियामापर्छ। यो स्थानमा ज्वालामुखी सक्रिय छ। यो स्थान निकै खतरनाक छ। यसको नजिक जानु ज्यानका लागि घातक हुनसक्छ।
डर लाग्दो खेलौंनाको टापु
यो रहस्यमय स्थान हो। म्याक्सिको भन्दा दक्षिण जोचिमिको नहरबीच 'ला इस्ला डे ला म्यूनेकस' मा यो स्थान छ। यहाँ थुप्रै खेलौना रुखमा झुन्डिएको देख्न सकिन्छ। स्थानीयका अनुसार यहाँका खेलौना एक अर्कासँग कानेखुशी गर्छन्। आँखा घुमाउँछन्। र, एकआपसमा इशाराले कुरा गर्छन्। यो स्थान निकै खतरनाक छ। यहाँ घुम्न जाने हो भने एक्लै नजानु टूर गाइड लानु भन्ने निर्देशन सरकारले दिएको छ।
बरमुडा खोच पछिल्लो एक शताब्दीदेखि रहस्यको गर्भमै छ। थुप्रै शोध तथा अध्ययनका बाबजुद पनि वैज्ञानिकले यसको रहस्यको पर्दाफास गर्न सकेका छैनन्। लामो समयदेखि यो खोंचमा थुप्रै हावाइ जहाज र पानीजहाज रहस्यमय ढंगबाट गायब भएका छन्। यो स्थान अटलान्टिक महासागरको ब्रिटेनको तटीय क्षेत्रमापर्छ। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको पूर्वी तटमा मियामी, फ्लोरिडाबाट १७ सय ७० किलोमिटर र हेलिफ्याक्स, नोवा स्कोटिया, क्यानडाको दक्षिणमा १३ सय ५० किलोमिटर टाढा छ।
इजिप्टमा रहेको गीजाको पिरामिड आज पनि रहस्यको गर्भमा छ। यसको अद्भुत कलाकृति र यसको विशाल आकृतिको कारण आज पनि वैज्ञानिकका लागि अनुसन्धानकै विषय बनेको छ। यसको निर्माण हजारौं वर्ष पहिले मानिसले कसरी गरेका थिए भन्ने अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। गीजाको पिरामिडभित्र थुप्रै राजकीय अन्त्येष्टि स्थल छन्। यस बारेमा पनि वैज्ञानिकले केही पत्ता लगाउन सकेको छैन।
म्याग्नेटिक हिल लद्दाख
लद्दाखस्थित म्याग्नेटिक हिल निकै रहस्यमयी जग्गा हो। यहाँ गुरुत्वाकर्षणका प्रचलित नियमले काम गर्दैनन्। सबै काम उल्टो हुन्छ। यहाँ गा रोक्दा गाडी आफैं अग्लो स्थानतर्फ चढ्न थाल्छ। वैज्ञानिकहरूले यस्तो हुनु पहाडको शक्तिशाली गुरुत्वका कारण भएको बताएका छन्। अर्का विशेषज्ञले यस्तो हुनु दृश्य भ्रमको कारण भएको बताएका छन्। जे भए तापनि यसको रहस्य अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। अमर उजालाबाट
प्रकाशित: September 2, 2021 | 13:10:25 काठमाडौं, बिहीबार, भदौ १७, २०७८
काठमाडौं, बिहीबार, भदौ १७, २०७८
विश्वकै शान्त कोठा, जहाँ आफ्नै मुटुको धड्कन र हड्डीको आवाज सुनिन्छ
शान्ति हामी जोकोहीलाई मन पर्छ। शान्त वातावरणमा म एकाग्र हुन्छ। शान्त वातावरणमा सहजै काम गर्न सकिन्छ। आज विश्वकै शान्त कोठाको चर्चा गर्न गइरहेका छौं।
के मृत्युपछि पनि मान्छे ज्युँदो फर्किन सक्छ?
के कोही मृत्युपछि पनि ज्युँदो फर्किनसक्छ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। मानिसको शरीर एक बायोलोजिकल प्रोसेसमा आधारित हुन्छ। हाम्रो शरीरले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नुभन्दा पहिले शरीरको कार्यप्रणालीलाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ।
जहाँ श्रीमान् जीवित हुँदा पनि विधवा हुन्छन् महिला
हिन्दू धर्ममा विवाहित महिलाका लागि सिन्दूर, पोते, टीकाको निकै महत्व हुन्छ। यसलाई महिलाहरूको सौभाग्यको प्रतीक मानिन्छ। महिलाहरूले श्रीमान्को दीर्घायुका लागि व्रत बस्ने पनि गर्छन्।
पैसाको लोभमा एक वर्षदेखि आमाको शव लुकाएको खुलासा
अस्ट्रियामा एक व्यक्तिले आमाको शवलाई घरको भूमिगत कोठामा एक वर्षसम्म लुकाएर राखी उनको नाममा आउने पेन्सन लिने गरेको पाइएको छ।
क्रियाशील सदस्यबाट नाम हटाएको भन्दै वडा सभापतिले गरे कांग्रेसको काजक्रिया
क्रियाशील सदस्यता खारेज गरेको भन्दै डडेल्धुराका एक वडा सभापतिले नेपाली कांग्रेसको काजक्रिया गरेका छन्।